Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Archives | 2015 | May
Posted on May 30, 2015 by Free Burma Info
Free Burma Info's Facebook Wall 2015-05-30 21:53:55
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်းလူဦးရေမှာ ၅၁ ဒသမ ၄၉ သန်းရှိပြီး လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ…
Posted on May 30, 2015 by Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-30 08:53:01
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နှင့် ဆက်စပ်ဖမ်းဆီးထားသူများကို ရုံးထုတ်စစ်ဆေးနော်နိုရင်းကျနော်တို့ ရှေ့နေပါဝါတင်ပြီးတော့ တရားလို စစစ်ပါတယ်။ တရားလိုက ကျောက်တော်မြို့နယ်စခန်းမှူး ဦးမင်းလွင်ပေါ့နော်။ ဒီနေ့ ထူးခြားတာကတော့ စကခ (၉) က ဗိုလ်ကြီးက တရားခံပါ သက်သေတွေပစ္စည်းတွေ လာအပ်တဲ့အတွက် သူက အမှုဖွင့်
Posted in Political Prisoners Related	| Tagged AAPP (Burma)	|
Posted on May 29, 2015 by Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
https://www.scribd.com/doc/267005410/%E1%81 ရှစ်စက္ကန့်ငြိမ် (စွန့်လွှတ်သူတို့ရဲ့ရ…
https://www.scribd.com/doc/267005410/%E1%81 ရှစ်စက္ကန့်ငြိမ် (စွန့်လွှတ်သူတို့ရဲ့ရာဇဝင်)
Ko Bo Kyi (AAPP) joint secretary interview with DVB news on 29 May 2015 at Rango…
Ko Bo Kyi (AAPP) joint secretary interview with DVB news on 29 May 2015 at Rangoon office.
Interview with DVB news
A meeting was held in Naypyidaw at the Max Hotel meeting hall on May 26, 2015, f…
A meeting was held in Naypyidaw at the Max Hotel meeting hall on May 26, 2015, from6pm to 8 pm. This meeting was attended by representatives of Pyithu Hluttaw and Amyotha Hluttaw, AAPP members Ko Bo Kyi, Ko Aung Myo Kyaw and Ko Kyaw Soe and Ko Tin Maung Oo from FPPS. The aim of the meeting was to hold discussions on how to legitimise the political prisoner issue.
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိစ္စများ ဥပဒေအရ တရားဝင်ဖြစ်မြောက်လာစေရန်အတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တို့ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အကြံဥာဏ်ရယူခြင် ဆွေးနွေးပွဲအား ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ မေလ ၂၆ ရက်နေ့ ညနေ ၆နာရီမှ ၈နာရီအထိ နေပြည်တော်ရှိ မက်စ်ဟော်တယ်အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နှင့် အမျိုသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၈ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီး အေအေပီပီမှ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုကြည်၊ ကိုအောင်မျိုးကျော်၊ ကိုကျော်စိုးနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့မှ ကိုတင်မောင်ဦးတို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။
Posted on May 28, 2015 by Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-28 18:11:08
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ နှင်.အေအေပီပီပူးပေါင်း၍နေပြည်တော်ရှိနိုင်ကျဉ်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင်တွေဆုံစဉ်
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-28 11:08:53
ရှေ့နေဦးမြင့်အေးနဲ့တူတူ ပုဒ်မ၁၈ ဖြင့်ထောင်၎လကျနေသော ကိုမျိုးသူထွတ်အား ယနေ့ နောက်တမှုဖြင့် ထပ်မံရုံးထုတ်နေစဉ်..ရဲဘော်ရေ အားတင်းထားပါလေ…၂၈.၅.၂၀၁၅
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-28 07:24:26
(၂၇.၅.၂၀၁၅ ) နိုင်ငံရေးအကျဥ်းသူ(အမျိုးသမီး)ဟာင်းများ ၏ ကျောင်တော်ပြန်တို.စကားဝိုင်း…………………..
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-28 03:51:32
Burma Partnership » Marching to the Same Tune? A Briefing Paper on Protests and Freedom of…
Facilitated by the proliferation of social media as an agent for social and political change over the last five years, mass organized protests have simmered and erupted across the globe. From the 2011 “Arab Spring” in the Middle East and North Africa, to the Occupy Movement in Western cities, from…
Posted on May 27, 2015 by Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-27 10:27:10
၂၆.၅.၂၀၁၅ သာယာဝတီ တရားရုံးမှာ အသက်မပြည့်လို့ အာမခံနဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ မိုးသီဟ နဲ့အတူ…။
Photo-Ko Gyi Myo
လက်ပံတန်းဒေသခံ ကိုနန္ဒာစိုးနှင့် အဖွဲ့ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့်ရုံးထုတ် ၂၇ မေ ၂၀၁၅။
အုတ်ဖိုမြို့မှ ဆရာဦးဟန်ရှိန်နှင့်လက်ပံတန်းတရားရုံး၌ #၆ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်း
၂၇.၅.၁၅ ၁၂:၄၀ — with စည်သူ ထွန်း and 24 others.
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-27 07:56:43
ဒီနေ့ ကျောက်တံတား တရားရုံးပေါ်က ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးဇင် အား တွေ.မြင်ရစဉ် ။==============================================သတင်းဓါတ်ပုံ-Min Naing.
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-27 06:02:28
ကျောင်းသားသပိတ်စခန်းဖြိုခွဲစဉ်က ရဲတပ်ရင်း၂ရင်း( ရဲအင်အား၁၂၀၀၀)သုံးခဲ့ကြောင်း ရဲမှူးဖုန်းမြင့် ထွက်ဆိုပြီ=========================================
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-27 05:55:13
U Nay Lin Aung
အလုပ်သမားတွေအကုန်ပြန်ဖမ်းခံရပြီ၂၆ ၅ ၂၀၁၅ နေ့ရန်းကင်းတရားရုံးတွင်အလုပ်သမားများအားတရားရုံးမှအမှုစစ်တရားသူကြီးနာမည်မပြောတရားမျှတတဲ့တရားသူကြီးဟုဆိုကာအလုပ်သမားများအားအာမခံပေးမည်အာမခံခေါ်ခိုင်းပြီးအလုပ်သမားများအားတရားရုံးတံကားများပိတ်ထားပြီးအာမခံရှာခိုင်ပါတယ်အချိန်တန်လိုအလုပ်သမားများအပြင်ထွက်မရ၍အာမခံမရသည့်အခါအင်းစိန်ထောင်သို့ပို့လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲယနေ့လုပ်ဆောင်မှုသည်မီဒီယာများကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရပါသည်။ထိုလုပ်ဆောင်မှု့၏နောက်ကွယ်၌ဘာရှိနိုင်သလဲံ
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-27 05:45:20
DVB – ပုဒ်မ ၃၃၂နဲ့ BBC သတင်းထောက်ကုို ဒုတိယအကြိမ် စစ်ဆေး
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတဦး တာဝန်ချိန်မှာ နာကျင်စမှု ပုဒ်မ ၃၃၂နဲ့ BBC သတင်းထောက်ကုို မန္တလေးမြို့မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ဦးကျော်ဇေ သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ …
Posted on May 26, 2015 by Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-05-26 15:47:10
Daw Khin Thandar
AAPP နိင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းနှင့် NLD လွှတ်တော်အမတ်များ၊တိုင်း၇င်းသားအမတ်များတွေ့ဆုံဆွေးနွေး။